Iindaba -Infinitus Plaza
Guangzhou Infinitus Plaza ibekwe kwiBaiyun Town entsha, kwiSithili saseBaiyun, kwisiXeko saseGuangzhou, kwiPhondo laseGuangdong. Yayilwa ngumzobi wehlabathi ophezulu nodumileyo, owaziwa ngokuba ngu "Queen of curves" --- Zaha Hadid.
I-Infinitus Plaza idibanisa le mimandla mibini ngohlobo lothotho "lwamakhonkco angenasiphelo", njenge "∞", ijikeleze igadi esembindini ukwenza indawo yokunxibelelana evulekileyo kwaye yazisa ukukhanya kwendalo okuninzi ngaphakathi, ilungile kwindalo esingqongileyo, ukonga umbane kwaye kufutshane nendalo.
Zonke iiphaneli zodonga lwealuminium zeplanethi ye-Infinitus Plaza zenziwa yinkampani yethu-- i-Yingjiwei mveliso wezinto zokwakha. I-aluminium alloy yeplaza ubukhulu becala i-3003 H24 kunye ne-5083. Ukuqinisekisa umgangatho wepaneli, ubukhulu be-facade bayacelwa ukuba basebenzise i-4.0mm kunye ne-5.0mm aluminium esemgangathweni. Unyango oluphezulu lwe-PVDF yokutyabeka okuninzi kuzo zonke iipaneli kuthintela ukuba yeyiphi kwimvula eneasidi, ukubanda kunye nemozulu eshushu, kwaye kuqinisekiswe ukuba iimveliso zihlala ixesha elide kwaye zihlala zijongeka.
Inoveli yayo, uyilo loyilo kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo lonyusa ubunzima bokuqhubekeka kweepaneli zealuminium, kodwa babambelela kwisimo sengqondo sokungayeki, uphando kunye nokusebenza nzima ngokuqhubekayo, ekugqibeleni silungisa ezo ngxaki nganye nganye. Ukubonisa amandla ethu emveliso, ugxininiso kumgangatho kunye nokunyaniseka kubathengi, sikwahlula umgca omnye wemveliso entsha yale projekthi. Inkonzo yabathengi ekhethekileyo, umgca wemveliso ezimeleyo, iqela lokuphendula ngokukhawuleza loyilo, imveliso kunye nengxaki yokufaka indawo, zonke zidunyiswa kakhulu kwaye zamkelwe liqela leZaha Design Institute kunye nomthengi.
Iprojekthi ye-Guangzhou Infinitus Plaza sele iza kugqitywa, iya kuba ngumqondiso omtsha we-Guangzhou kunye neeprojekthi ezibalaseleyo kwihlabathi.
Ngokubhekisele kumzi-mveliso wethu, sikulungele ukucela umngeni kuyo nayiphi na iprojekthi, ubunzima abuzukusibetha, kodwa busincede somelele kwaye somelele ngakumbi. Apho kukho umyolelo, kukho i-Yingjiwei.